DEGMADA XARIIRAD OO WAA CUSUBI U BERYEY | Dhamays Media Group
DEGMADA XARIIRAD OO WAA CUSUBI U BERYEY
Mar aan dhawaan socdaal shaqo ku tegay degmada xariirad ayaa waxa indhahayga soo jiitay horumar balaadhan oo ay samaysay degmadaasi. si aan xog buuxda uga helo xaalada dhaqan-dhaqaale waxan waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay gudoomiyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay degmada xariirad oo ah, Magaalo-xuduudeed ka tirsan Gobolka Selel Mudane Ilyaas Xasan Axmed, waxaanu xog-waran naga siiyey degmada iyo halka ay juquraafi ahaan dhacdo, duruufaha ku gedaaman iyo hibooyinka gaarka ah ee illaahay ku manaystay. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka waramay dhaqaale ahaan iyo muhiimada balaadhan ee ay yeelan karto haddii kor loo qaado kaabayaasha dhaqaalaha ee ay u baahan tahay degmadu.
Ugu horeyn, gudoomiye Ilyaas waxa uu hadalkiisa ku bilaabay; waxa la i magacaabay 3/6/2018-ka, waxyaabihii ugu horeeyey ee aan ka qabtay degmada markii aan imi waxa ugu horeeyey; wacyigelin balaadhan oo oo an ka samaynay dhanka qabyaalada, isla markaana waxan ku boorinay bulshada reer xariirad in ay hab waddaniyad ah ku shaqeeyaan, arrintaasina horumar balaadhan baan ka gaadhanay. Dhanka kale waxyaabaha guulaha aan ka gaadhnay waxa ka mid ah; in aan keeno hay’ado quudiya qoysaska danyarta ah ee degmada xariirad.
Degmada Xariirad Waxay ku taalaa meel aad u muhiim ah (Istaraatiji ahaan), sida magaalada wajaale oo kale, ka deegaan ahaan, dal ahaan iyo gobol ahaan-ba waa degmada ugu dhow dalka itoobiya Somaliland oo dhan gaar ahaan caasimada labaad ee dalka itoobiya ee Diridhaba. Magaalada Diridhaba Masaafo ahaan waxay Degmada Xariirad u jirtaa 147KM, sidaa darteed waxan odhan karnaa halka ugu dhow ee ugu dhow itoobiya, arrintaasi waxay u sahlaysa ama ka dhigi karta degmadan meel ganacsiga aad ugu wanaagsan, taasi oo ganacsiga iyo wax is dhaafsiga labada dal si fudud wax isku weydaarsan karaan.
Si himilooyinkaa iyo kheyraadkaa balaadhan ee ku duugan Gobolka Selel, waxan dawlada Somaliland ka codsanaynaa in degmada loo diyaariyo in ay noqoto magaalo ganacsiyeed isku xidha gobolada galbeedka Somaliland iyo dalka itoobiya, si arrimahaasi u hirgalaana waxa muhiim ah in loo sameeyo xafiiska laanta socdaalka, si loo sahlo isku socodka ganacsiga iyo labada bulshaba.
Ka gudoomiye ahaan waxan ka shaqayn doonaa sidii degmadu u noqon lahayd magaalo ganacsi, taasi oo ay mari doonaan kheyraadka kaluunka iyo milixduba. Si arrimahaasi u suurtoobaan, waa in kalluunka seylac yaala loo sameeyo qaboojiyayaal kuwaasi oo bedqabka kalluunka hagaajin doona. Dhanka kale, sida khabiirada dhanka kalluunka iyo milixdu sida ay sheegaan, milixda tokhoshi iyo kalluunka dalkeenu waa kuwa ugu tayo iyo tiro fiican sidaa darteed waa in fursadaa laga faa’iidaystaa.
Degmada dhaqaaleheedu waxay ku tiirsanayd, cashuurta yar ee aan ka qaadno shacabka reer xariirad iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi kooban oo u gudbi jirey dhanka itoobiya laakiin arrintaasi hoos u dhac weyn baa ku yimi intii xaalada itoobiya kacsanayd.
Haddii wax qabadka degmada aan ka sheekeeyo, waxa aad noo garab-qabtay badhasaabka gobolka mudane Mowliid Maxamed, inkasta oo ay badhasaabo badan oo hore soo mareen, haddana, waa masuulkii ugu wax qabadka badnaa ee soo mara gobolka Selel, maxaa yeelay waa nin kula tashanaya oo hoos u eegaya baahida bulshadu qabto arrintaasina waxay sahashay in aan si kal iyo laab ah ugu wada tashano hawlaha maamul iyo wax qabad ee degmada Xariirad. Waxyaabaha aan ka wada shaqaynay ee guusha aan ka gaadhnay waxa ka mid ah; sidii aan u yarayn lahayn kootarabaan farabadan oo mari jirey degmadan.
Maamul ahaan waxa noo qorshaysan in aan qabano waxa ka mid ah; cusbitaalkii oo aan furi doono dhawaan kaasi oo bulshada u adeegi doona. Sidoo kale ceel riig ah ayaa isagana bishan qodistiisii bilaabaynaa, hadda sahamintii ayaa soo dhammaatay. Hawlo badan baa qorshaha noogu jira laakiin kuwa muhiimada kowaad noogu jiraa waa kuwaa aan kor ku soo xusnay.
By Mowlid Cumar Kibar
Previous: Itoobiya Oo Beenisay Warr Ku Saabsan Heshiiska Dekedda Berbera Oo Ka Soo Yeedhay Xisbiga WADDANI
Next: Wasaaradda Beeraha Oo Digniin Ka Soo Saartay Duufaan Ku Soo Waajahan Sanaag Iyo Xeebaha Gobolka Saaxil Ee Somaliland